အနုပညာ Archives - Page 10 of 10 - Achawlaymyar
သူမရဲ့ ချစ်သူ ချောချောလေးကို ပရိသတ်တွေရှေ့ တရားဝင်ချပြလိုက်တဲ့ ခြူးလေး
June 23, 2020 by Achawlaymyar
သူမရဲ့ချစ်သူကို ပရိသတ်တွေရှေ့တရားဝင်ချပြလိုက်တဲ့ ခြူးလေး . . ပရိသတ်ကြီးရေခြူးလေးကတော့ မာန်မာနကင်းပြီး ချစ်စဖွယ်မျက်နှာလေးနဲ့ချိုသာဖော်ရွေအေးချမ်းတဲ့မျက်နှာလေးက ပရိသတ် ရင်ထဲကို စွဲစေခဲ့တဲ့အပြင် အနုပညာရှင်တော်တော်များများက ခြူးလေးနဲ့တွေ့ရင် TikTok မဆော့တဲ့သူတောင် ဆော့ချင်အောင် သိမ်းသွင်းနိုင်တာကြောင့် TikTok မင်းသမီးလေးလို့ ပရိသတ်တွေက တင်စားခေါ်ဝေါ်လေ့ရှိကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေများစွာရိုက်ကူးနေသူဖြစ်တဲ့အပြင် ချစ်စရာအမူအရာတွေသာမက သရုပ်ဆောင်ကောင်းတဲ့ အချက်တွေနဲ့ပရိသတ်တွေကို ဖမ်းစားထားတဲ့ ရခိုင်တိုင်းရင်းသူလေးတစ်ဦးပါ။ အမြဲသူမရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကို သူမရဲ့ပရိသတ်အပေါ်ပွင့်လင်းစွာ ချပြလေရြှိသူတစ်ယောက်ပါ။ အရမ်းကိုရုးသားပွင့်လင်းတဲ့အပြောအဆို အနေအထိုင်လေးတွေကြောင့် ပရိသတ်ရင်ထဲ ပိုမိုခိုင်မာစွာ ရောက်ရှိနေတဲ့အချက်ပါပဲနော်။ သူမအနေနဲ့ အခုချိန်မှာ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေပါ ရိုက်ကူးနေရပြီဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ သူမချစ်သူကိုပရိသတ်ရှေ့ကို ချပြခဲ့တာပါ။ Lလွန်းဝါရဲ့ ” အဆုံးမဲ့ ”သီချင်းလေးကို shareကာ သူမချစ်သူကို Mention ခေါ်ခဲ့တာကြောင့် ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေကတော့ ခြူးလေးတစ်ယောက် သူမရဲ့ချစ်သူကိုအလင်းပြပြီးလာဆိုတဲ့မှတ်ချက်တွေပေးနေကြတာပါပဲနော်။ပရိသတ်ကြီးရော … Read more
June 21, 2020 by Achawlaymyar
ဒီနေ့(ဇွန်လ၂၁)ရက်ဟာမင်းသွေးရဲ့မွေးနေ့ပါ။မင်းသွေးရဲ့မွေးနေ့မှာနေတိုးနဲ့အတူမိသားစုဝင်တွေကကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလုပ်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။ နေတိုးကတော့ ဇွန်လ(၂၁) ရက်နေ့မှာကျရောက်တဲ့ မင်းသွေးရဲ့ မွေးနေ့အတွက် အလှူအတန်းတွေ လုပ်ရင်း ကုသိုလ်ပြုပေးခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ မင်းသွေးနဲ့ နေတိုးရဲ့ပရိသတ်တွေကလည်း ဒီအလှူအတွက် သာဓု ခေါ်ဆို ခဲ့ကြပါသေးတယ်။ “ဒီနေ့ကွယ်လွန်သူသရုပ်ဆောင်မင်းသွေး(ခ)နေမင်းအောင်(ခေါ်)ညီလေးငယ်အားရည်စူး၍ဆွမ်းဆက်ကပ်ပြီးတော့ရခိုင်စစ်ရှောင်ပြည်သူများအတွက်တဲအိမ်(၁၅)လုံးကိုအလိုတော်ပြည့်ဆရာတော်ကြီးအားဦးထိပ်ထားလျက်ရန်ကုန်မြို့အလိုတော်ပြည့်ကျောင်းတိုက်သို့လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။ပရိသတ်များအားလုံးကုသိုလ်အမျှရပြပါစေခင်ဗျာ” ဆိုပြီးတော့နေတိုးရဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်ပေ့ခ်ျမှာဇွန်လ၂၁ရက်နေ့ကရေးသားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။နေတိုးတို့မိသားစုဟာကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့မင်းသွေးအတွက်လစဉ်လတိုင်းအလှူအတန်းတွေပြုလုပ်ပေးခဲ့သလိုမင်းသွေးဖြစ်ချင်ခဲ့တဲ့ ဆန္ဒများကိုလည်း ဖြည့်ဆည့် လုပ်ကိုင်ပေးနေတာ တွေ့ရပါတယ်။ မင်းသွေးဟာ ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ(၃) ရက်နေ့က ရုတ်တရက် ကွယ်လွန်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ကွယ်လွန်ပြီးတဲ့နောက်မှာလည်း ပရိသတ်တွေရော၊အနုပညာရှင်တွေကပါဝမ်းနည်းကြေကွဲခဲ့ကြရပါတယ်။မင်းသွေးကွယ်လွန်ပြီးတဲ့နောက်မှရုံတင်ခဲ့တဲ့မုန်းစွဲရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား၊ သတ်ကွင်း ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား၊ မဟူရာ ရုပ်ရှင်ရုံ ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေ ကနေတဆင့်လည်း မင်းသွေးကို ပရိသတ်တွေက သတိရစေခဲ့ပြန်ပါတယ်။ နေတိုးကလည်း မင်းသွေးရဲ့ ဆန္ဒအရ ရခိုင်ပြည်နယ် မာန်အောင်ကျွန်းမှာ တည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့တဲ့မာန်အောင်မြို့နယ်သံကျောက်တောင် မဟာဇေယျသိဒ္ဓိမဟာမုနိရှင်တော်မြတ်ဘုရာကြီးဘုရားအနေကဇာတင်လှူဒါန်းခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။မင်းသွေးရဲ့တစ်ကိုယ်တော်အခွေကိုလည်းအစ်ကိုဖြစ်သူနေတိုးကအပြီးသတ်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။၂၀၂၀ခုနှစ်၊အောက်တိုဘာလ(၃)ရက်နေ့ဆိုရင်တော့မင်းသွေကွယ်လွန်တာ (၂) နှစ်ပြည့်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Image may contain: 1 … Read more
ချယ်ရီသင်းရဲ့ Video ထွက်ပေါ်လာတဲ့ကိစ္စ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဖြေရှင်းလိုက်တဲ့ အဆိုတော် ချယ်ရီသင်း
June 19, 2020 by Achawlaymyar
အဲ့မှာ သေချာကြည့် ငါ့မှာ ဘာTattoo မှ မရှိဘူး အခုလက်ရှိ ယောကျာ်းလေး Group တွေ လိုက်ဖြန့်နေတဲ့ ချယ်ရီသင်းရဲ့ HD Video ထွက်ပေါ်လာတဲ့ကိစ္စ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒဲ့ချွတ်ပြဖြေရှင်းလိုက်တဲ့ အဆိုတော် ချယ်ရီသင်း ငါ့ကိုတိုက်ခိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်လဲ ငါ့အကြောင်းကိုသေချာစုံစမ်းပြီးတော့မှ နင်တို့လုပ်ခဲ့ရမှာ ငါ့ဘဝမှာ ဘယ်သူ့ကိုမှမတိုက်ခိုက်ဖူးသလိုဘယ်တုန်းကမှလဲ မကောင်းတာမလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက် ငါ့ကိုယ်ငါ အမြဲတမ်းအတွက် လိပ်ပြာလုံတယ် အခုလိုရှင်းပြတာကလဲ ငါ့ရဲ့သိက္ခာ ငါ့မိသားစုသိက္ခာ ငါ့ကိုအားပေးတဲ့ပရိတ်သတ်တွေ ငါ့ရဲ့ဆရာသမားတွေ ငါ့ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေအတွက်ရှင်းပြတာ မင်းတို့သိထားရမှာက ငါကဒီလိုနေရာသေးသေးလေးရဖို့ ပြိုင်ပွဲပေါင်းများစွာ အခက်အခဲပေါင်းများစွာကို ကျော်ဖြတ်ပြီးမှရောက်ခဲ့တာ ငါ ဒီနေရာကို လွယ်လွယ်နဲ့ရောက်ခဲ့တာမဟုတ်တဲ့အတွက် မင်းတို့ငါ့ကို ဘယ်လိုပဲဖြိုလဲ ဖြိုလဲ ငါပြိုလဲမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာပဲ… ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မင်းတို့အားလုံးဝဋ်မလည်ပါစေနဲ့လို့ပဲ ငါဆုတောင်းပါတယ်… You’ll never break me … Read more
မန္တလေးမှာ ကဖေးနှင့် စားဖွယ်စုံဆိုင်ကြီး ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီး ပရိသတ်တွေကို လာရောက်အားပေးဖို့ ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တဲ့ ခင်လှိုင် . . .
မန္တလေးမှာ ကဖေးနှင့် စားဖွယ်စုံဆိုင်ကြီး ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီး ပရိသတ်တွေကို လာရောက်အားပေးဖို့ ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တဲ့ ခင်လှိုင် အငြိမ့်ဇာတ်သဘင်တွေမှာ ခင်လှိုင်ကတော့ ဟာသလူရွှင်တော်တစ်ယောက်အဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ဇာတ်ပို့ဇာတ်ရံတစ်ယောက်အဖြစ် အောင်မြင်လာခဲ့သူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ခင်လှိုင်က သူကိုယ်တိုင် ဒါရိုက်တာလုပ်ပြီး ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေကိုလည်းရိုက်ကူးနေလျက်ရှိပြီး ပရိသတ်အားပေးမှုကို အထိုက်အလျောက်ရရှိနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ခင်လှိုင်ကတော့ တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် သူ့ကိုယ်သူတိုးတက်အောင် အမြဲတမ်းကြိုးစားနေလျက်ရှိပါတယ်။ ဒီတစ်ခါမှာလည်း ခင်လှိုင်က သူ့ရဲ့စီးပွားရေးခြေလှမ်းအသစ်ဖြစ်တဲ့ကဖေးနဲ့စားဖွယ်စုံဆိုင်ကြီးကို မန္တလေးမြို့မှာ မောင်နှမတွေနဲ့အတူ စုပေါင်းပြီး ဖွင့်လှစ်လိုက်တဲ့အကြောင်းကို အခုလိုပဲ ပြောပြလာပါတယ်။ “ကျွန်တော်တို့ညီအကိုမောင်နှတွေစုပေါင်းအားနှင့် အညာမြေ ကဖေးနှင့်စားဖွယ်စုံ ဆိုင်သစ်ကို မန္တလေးမြို့ ၆၂ လမ်း သိပ္ပံလမ်း ၁၀၁/၁၀၂ ကြားတွင်ဒီနေ့ဖွင့်နိုင်ခဲ့ပါပြီ မန်းရွှေမြို့ကိုရောက်ရင်ကြွရောက်ပြီးအားပေးကြပါဦးခင်ဗျာ” ဆိုပြီး ပရိသတ်တွေကို ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။ ခင်လှိုင်ကတော့ သူ့ရဲ့ နောက်ထပ်စီးပွားရေးခြေလှမ်းတစ်ခုကို စတင်လိုက်ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ … Read more
မနက်ဖြန်ကျရောက်မယ့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အသက်(၇၅)နှစ်ပြည့် မွေးနေ့လေးအတွက် မွေးနေ့အကြိုဆုတောင်းပေးခဲ့တဲ့ ဖွေးဖွေးတို့မိသားစု . . .
June 18, 2020 by Achawlaymyar
မနက်ဖြန်ကျရောက်မယ့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အသက်(၇၅)နှစ်ပြည့် မွေးနေ့လေးအတွက် မွေးနေ့အကြိုဆုတောင်းပေးခဲ့တဲ့ ဖွေးဖွေးတို့မိသားစု မင်းသမီးချောလေး ဖွေးဖွေးကတော့ ဆယ်စုနှစ်ကျော်တစ်စုစာ အနုပညာသက်တမ်းမှာ အကယ်ဒမီဆုကြီးသုံးဆုကို ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖွေးဖွေးက လက်ရှိမှာလည်းထိပ်တန်းမင်းသမီးတစ်ယောက်အဖြစ် ရပ်တည်နေပြီး အိမ်ထောင်မပြုသေးပဲ တစ်ကိုယ်တည်း အပျိုကြီးအဖြစ် မိသားစုနဲ့အတူတူ အချိန်တွေကုန်ဆုံးနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖွေးဖွေးကတော့ အသက် (၃၅)နှစ်ကျော်လို့မှ ဖူးစာမတွေ့ရင် အပျိုကြီးပဲလုပ်တော့မယ်ဆိုပြီး အင်တာဗျူးတွေမှာ ပြောထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ဒီနေ့မှာတော့ ဖွေးဖွေးတို့ မိသားစုလေးက မနက်ဖြန် ဇွန်လ (၁၉) ရက်နေ့မှာကျရောက်မယ့် နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အသက် (၇၅)နှစ်ပြည့် မွေးနေ့လေးအတွက် မွေးနေ့အကြိုဆုတောင်းပေးနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဖွေးဖွေးတို့က မိသားစုစုံညီနဲ့ “အမေစု သက်ရှည် ကျန်းမာ အန္တရယ်ကင်း ပျော်ရွှင်ပါစေ” ဆိုပြီး မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖွေးဖွေးတို့ … Read more
လတ်တလော ပျံ့နှံ့နေတဲ့ ကလေးဖွတ်ထားတယ်ဆိုတဲ့ ကောလဟာလတွေနဲ့ ပက်သက်ပြီး ပွင့်ပွင်းလင်းလင်း ဖြေရှင်းလိုက်တဲ့ မယ်လိုဒီ
June 17, 2020 by Achawlaymyar
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ မင်းသမီး မယ်လိုဒီကတော့ ခင်ပွန်းနဲ့ အတိအလင်း ကွာရှင်းခဲ့ပြီး လက်ရှိမှာတော့ တစ်ဦးတည်းသော သားလေးနဲ့ အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ ဘဝကို ဖြတ်သန်းနေပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ခင်ပွန်းနဲ့ ကွာရှင်းခဲ့ပြီးနောက်မှာတော့ ကောလဟာလများ ဆက်တိုက်ဆိုသလို ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ မင်းသမီး မယ်လိုဒီကတော့ အဆိုပါ ကောလဟာလများနဲ့ ပက်သက်ပြီး အခုလို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ မယ်လိုဒီ ပြောခဲ့တာကတော့ ” အကောင့်တုတွေနဲ့pageမှာ မကောင်းတာတွေ ဝင်မရေးပါနဲ့ရှင် ကျွန်မမှာ အရင်က သား ဖြစ်ဖြစ် သမီး ဖြစ်ဖြစ် ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် ဖုံးဖိထားလို့ရမယ်ထင်လား ကျွန်မရဲ့လှပမှုကြောင့်သရုပ်ဆောင်အလုပ်ကို လုပ်ဖို့ အားလုံးကတိုက်တွန်းလို့ လုပ်ဖြစ်ခဲ့တာပါ အဲ့ဒီအတွက် အကောင်းအဆိုး မျှတပါတယ် ကျွန်မသား ဖြစ်ဖြစ် သမီး ဖြစ်ဖြစ် မွေးထားခဲ့ရင် အသားရည်ရဲ့လှပမှု မျက်ဝန်းရဲ့ဆွဲဆောင်မှု ကျစ်လစ်တင်းရင်းသော … Read more
May 28, 2020 by Achawlaymyar
ဖြူစင်တဲ့အပြုံး ရိုးသားတဲ့ဂုဏ်လေးတွေကြောင့် ပရိသတ်အချစ်ပိုနေရသူကတော့ ဖြူဖြူထွေးပါ။ အနုပညာလောကထဲ စတင်ဝင်ရောက်စဉ်က ဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှုများစွာကြုံခဲ့ရတဲ့ ဖြူဖြူထွေးကတော့ အခုဆိုရင် အားပေးသူပရိသတ်အခိုင်အမာနဲ့ ရပ်တည်နေနိုင်တဲ့မင်းသမီးတစ်လက် ဖြစ်လို့နေပါပြီ။ လက်ရှိအချိန်မှာတော့ ကြော်ငြာတွေလည်း ဆက်တိုက်ရိုက်ကူးနေရပြီး သူ့ကိုအပ်တဲ့ကြော်ငြာတွေကိုလည်း ကိုယ်ပိုင်အိုင်ဒီယာနဲ့ ဗွီဒီယိုလေးတွေလုပ်ကာ တင်ဆက်ပေးလေ့ရှိသူပါ။ တောရွာမှာကြီးပြင်းခဲ့သူပီပီ တောဓလေ့လေးတွေ အများဆုံးပါဝင်တဲ့ ဖြူဖြူထွေးရဲ့ဗွီဒီယိုတွေကိုတော့ အခုဆိုကြည့်ရှုအားပေးသူ သန်းချီပြီး ရှိလာတဲ့ အောင်မြင်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီတစ်ခေါက်မှာလည်း ရှင်းရှင်းကြာဇံထုတ်ရဲ့ ကြော်ငြာလေးကိုတော့ သူရိုက်လေ့ရိုက်ထမရှိတဲ့ ဇာတ်အိမ်လေးတည်ဆောက်ပြီး ရိုက်ကူးထားပါတယ်။ လမ်းဘေးက ရေသန့်ဘူးလိုက်ကောက်ရတဲ့ သူဆင်းရဲဘဝကနေ သူဌေးသမီးလေးဖြစ်သွားတဲ့အထိ သူ့ရဲ့ဘဝမှာ ရှင်းရှင်းကြာဇံလေးက မပါမဖြစ်ပါဘဲ ဆိုတဲ့ဇာတ်အိမ်လေးကို ရသမျိုးစုံနဲ့ ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဖြူဖြူထွေးရဲ့ ဗွီဒီယိုလေးကတော့ (၂၄)နာရီမပြည့်ခင်မှာတောင် အားပေးသူ (၃)သန်းနီးပါးရှိနေပြီမို့ ဆယ်လီကမ္ဘာပရိသတ်ကြီးအတွက်လည်း ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ Source – Phyu Phyu Htwe … Read more